Ipulatifomu Yemicimbi Ebonakalayo neHybrid Yokukhula | Kuyashesha
Uhlaka Lokukhulisa Ukukhula
Ukwenza ngokwezifiso komcimbi
Ukunikezwa ithikithi nokubhaliswa
Stage Main & Breakouts
Ukuhlanganiswa Okubukhoma Okuhlanganisiwe
Imibukiso & Abaxhasi
Ngena ngemvume Zama mahhala Bhukha idemo
Zama mahhala Bhukha idemo
Ipulatifomu yemicimbi ye-Virtual & hybrid leyo ushayela ukukhula.
I-Accelevents iyipulatifomu yemicimbi ekwi-one ekunika amandla okukhulisa ukufinyelela kwakho, ukubandakanya izethameli zakho, ukudala umphakathi ohlale uluhlaza, nokushayela ukukhula kwenhlangano okusimeme.
# 1 Imicimbi Yesikhulumi se- Ukusheshisa Ukukhula
Yonke imicimbi iza nezinselelo nezinhloso zayo ezihlukile. Sidizayine ngqo ipulatifomu yethu ukusiza amaqembu emicimbi ukuthi asheshise izinhloso zawo zokukhula ngenkathi anciphisa ubunzima obuvame ukuhlotshaniswa nobuchwepheshe bemicimbi. Nweba ukufinyelela kwakho, hlanganisa ababekhona, khiqiza imikhondo efanelekile, wenze abaxhasi bakho bajabule, futhi wandise imali yakho engenayo ngama-Accelevents
Buka uhlaka lwethu lokusheshisa ukukhula
I-Expo Hall & Abaxhasi
Hlola oku Experience
Faka ubuhlakani bakho nobungcweti kungxenyekazi engenamkhawulo.
Dizayina imvelo yomcimbi wedijithali ovelele nomkhiqizo wakho nangaphandle kwekhodi.
Thengisa amathikithi, bhalisa ababekhona, bese uhlukanisa izethameli zakho kungakapheli imizuzu.
Iqembu ne-1: 1 Networking
Khuthaza umuzwa womphakathi kuwo wonke umcimbi ukudala ukuxhumana okuhlala isikhathi eside.
Khulisa imali yakho ngokuletha inani elithuthukisiwe nelingalinganiseka kubabonisi nakubaxhasi.
Khuthaza ababekhona ukuthi benze izenzo ezithile ezizobanikeza umvuzo ngokuzibandakanya kwabo.
Idatha yesikhathi sangempela
Finyelela khona manjalo idatha yomcimbi yakamuva ukuze uqonde kangcono ukusebenza kwakho.
Isipiliyoni Selebula Elimhlophe
Qalisa imvelo yomcimbi ophawulwe ngokuphelele sengathi ubuchwepheshe bakho.
Singatha umcimbi ophephile, ovikelekile futhi ohambisana namazinga omhlaba jikelele.
Khuphula amandla ngokuhlanganisa nesitaki sakho sobuchwepheshe uphinde uphathe wonke umsele.
Customer Amaprosesa asekelwe iku-DNA yethu
24/7 Ukusekelwa Kwangempela Okuvela Kubantu Bangempela
Ithimba lethu lokusekela elizinikele lihlala linomhlane wakho, noma ngabe usuku noma isikhathi (awekho ama-bots lapha!)
Ulwazi Oluningiliziwe Base kanye FAQs
Finyelela iqoqo lethu lemibhalo yomkhiqizo ukuxhasa ukuthuthukiswa komcimbi wakho njalo.
Imininingwane Yomkhakha, Izinsizakusebenza Eziwusizo, kanye Nokuvuselelwa Komkhiqizo
Funda ukuthi ungayakha kanjani imicimbi engajwayelekile ebandakanya izithameli zakho futhi uthole imiphumela elinganisekayo.
Over 12,500 izinkampani nezinhlangano zethemba ama-Accelevents ngemicimbi yawo.
Amakhasimende ethu akhulume…
Iphakheji ephelele elula ukuyisebenzisa nokusetha. Ukuthuthukiswa njalo. Ukusekelwa kwakwesabeka!
Ukuphathwa Kwezinhlangano Ezingenzi Nzuzo
Kulula kakhulu ukuyisebenzisa, iyashesha futhi ifundeka kalula, isevisi enhle yamakhasimende, abasebenzi abanolwazi kakhulu abaphendule yonke imibuzo yami ngokushesha, nenani elikhulu.
Ukuhlangana Kokulimala Kobuchopho eNyakatho Kentucky
Izici zepulatifomu kulula ukuzimisa, zakhiwe ngobunjiniyela, futhi zivumela ukusetshenziswa kwabahambele kube lula.
Izici ze-Expo Event bezilungele ingqungquthela yethu yephrojekthi yabafundi. Ukusekelwa bekuvelele ngaphambili nangaphakathi komcimbi.
Umkhandlu Wokuthuthukiswa Komnotho waseTexas
Izici ze-Accelevents zinembile kakhulu futhi zisebenziseka kalula. Insizakalo yamakhasimende iyesabeka futhi yenza ulwazi lube ngcono kakhulu!
I-Texas Association of Amabhodi Esikole
Impendulo yokusekela esheshayo yinhle! Futhi, sithanda ukuthi ipulatifomu yenziwa ngezifiso Ukuthuthuka okuqhubekayo nakho kuhle ngoba sizizwa sizwakala ekunikezeni impendulo.
Thola yakho funda on
Funda ukuqonda kwethu kwakamuva ngemicimbi, ubuchwepheshe, ukukhula komsebenzi nokuningi.
Amathiphu Wokwabiwa Kwemicimbi Ama-8 Wonke Umhleli Wemicimbi Kufanele Awazi
By UTania Hashim
Izizathu eziyi-16 zokuthi kungani kufanele ukhethe ipulatifomu yomcimbi wonke
Konke Odinga Ukukwazi Ngokuthi Ungayakha Kanjani Ingqungquthela Ephumelele Ku-inthanethi
Izizathu Ezi-7 Kungani Imicimbi Ebonakalayo Iyithuluzi Lokumaketha Elibalulekile
Izici Zakamuva Ozifunayo Ku-Platform Yokuhlela Umcimbi eku-inthanethi
Izici Eziphezulu Ezi-5 Okufanele Uzicabangele Ukugcina Umcimbi Wakho We-Hybrid Uphephile
Izindlela ezi-6 ezihamba phambili zokumaketha umcimbi ukuze ukhuthaze okuhlangenwe nakho kwakho komcimbi we-Hybrid
Izici ezi-6 eziphezulu okufanele uzicabangele lapho ubamba ingqungquthela eqhubekayo ye-Virtual noma ye-Hybrid
Ongakucabanga Uma Ukhetha Indawo Yomcimbi Oyinhlanganisela
Ungakuphatha Kanjani Ukulindelwa Kwabahambele Imicimbi Ebonakalayo
Izindlela eziyi-12 zokwakha imali engenayo ngomcimbi weHybrid
Ukubuyisa Okuholayo Kwemicimbi Ebonakalayo Neyi-Hybrid
Izenzakalo ziyavela. Ungalokothi uphuthelwe isigqi.
Bhalisela i-newsletter yethu ukuthola izindaba zethu zakamuva, amasu, amaqhinga, imibono, izibuyekezo zomkhiqizo nokuningi.
I-copyright 2021 iyashesha
Inqubomgomo yobumfihlo Imigomo Yokusebenzisa